फिल्म हल सञ्चालक भन्छन्– 'करोडौं घाटा भयो, अब हल खोल्न देऊ'
भारतले अक्टोबर १५ देखि हल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै नेपालका हल सञ्चालकलाई नेपालमा पनि हल खोल्न अनुमति दिनुपर्ने लागेको छ ।
आश्विन २०, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — गत असोजमा बानेश्वरको आइप्लेक्स मलमा नयाँ हल खुलेको थियो, 'वान सिनेमाज' । हल सञ्चालक एवं निर्माता प्रज्वल सम्शेर जबराले सोचेका थिए,'पायक पर्ने ठाउँमा हल खुलेको छ । पहिलो वर्षबाटै उत्साहजनक व्यापार होला ।'
तर सोचेजस्तो भएन, परिस्थिति उल्टियो । सञ्चालनमा आएको ६ महिनामै कोरोना महामारीले गर्दा हल बन्द गर्नुपर्‍यो । ६ महिना नाघिसक्यो 'वान सिनेमाज'को ढोकामा ताला झुन्डिएको । लामो समय हल बन्द गरेर बस्दा करोडौंको घाटा बेहोर्नु परेको जबरा बताउँछन् । 'असर त अलि धेरै नै गर्‍यो नि ! हल सुरु गर्न नपाउँदै बन्द गर्नुपर्दा धेरै गाह्रो भयो । पछिसम्म यसको असर पर्छ हामीलाई,' उनले आफ्नो समस्या सुनाए, 'अहिलेसम्म लगभग २ करोडको घाटा भइसक्यो ।'
हल सञ्चालनमा आएको केही महिनामै वान सिनेमाजले 'पिकअप' लिन सुरु गरिसकेको थियो । अन्य मल्टिप्लेक्स हलसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेको थियो । कोरोनाले गर्दा वान सिनेमाजको द्रूत गति धिमा भयो । 'अकुपेन्सी राम्रै थियो । ‍औसत ६० प्रतिशत अकुपेन्सी हुन्थ्यो । विकेन्डमा त ८०/९० प्रतिशत नै अकुपेन्सीमा हल चलिरहेको थियो । सञ्चालनमा आएको नयाँ र पुरानो मल्टिप्लेक्समध्यमा शीर्ष तीनमा थियो वान सिनेमाज । तर, महामारीपछि चिन्ताजनक नै छ अवस्था,' जबराले भने ।
२ पर्दाको हल खोल्न जबराले १० करोड लगानी गरेका थिए । अहिले हल नचलेपछि आम्दानी शून्य छ । हलको भाडा, बैंकको ब्याज र कर्मचारीको पारिश्रमिक गरेर हरेक महिना २५ लाख बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको उनी बताउँछन् । 'महिनामा २५ लाख खर्च हुन्छ । यो सात महिनामा २ करोड बढीको घाटा भयो ।'
उनको हल बन्द हुँदा हलमा कार्यरत ४५ कर्मचारी बेरोजगार भए । पहिलो लकडाउनमा त कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर अवस्था सम्हालेका थिए । तर लकडाउन अवधि लम्बिएसँगै कर्मचारीलाई बेतलबी बिदामा राखेका छन् । कोरोनाको प्रतक्ष्य प्रभाव पारेको यस क्षेत्रलाई सरकारले ‍सहुलियत दिनुपर्ने जबराको भनाइ छ ।
सरकारले हललाई सहुलियत नदिए हलहरु संग्रालयमा परिणत हुने बताउँछन् अर्का हल सञ्चालक सुमित मैनाली । भन्छन्, 'सरकारले हललाई अलिकति भए पनि सहुलियत दिएन भने नेपालका हल जति संग्रालय हुन्छन् । एकादेशमा नेपालमा पनि हलहरु थिए भन्ने मात्र हुन्छ । हल खुल्न दिए पनि अब केही हल बन्द हुने परिस्थितिमा पुगेका छन् ।'
दरबारमार्गमा रहेको मैनालीको हल 'क्यूज सिनेमा' पनि ६ महिनादेखि बन्द नै छ । हल बन्द हुँदा हलमा कार्यरत ६५ जना कर्मचारी रोजगारी गुमाएकोमा उनलाई चिन्ता छ । अहिले हलमा चारजना सेक्युरिटी गार्ड मात्र काम गर्छन् । हलको भाडा हरेक महिना १० लाख दिनुपर्छ । हल बन्दा हुँदा महिनामा २६ लाख बराबरको घाटा व्यहोर्नुपरेको मैनाली बताउँछन् । 'असोजसम्मको हिसाब गर्दा २ करोड ७५ लाख जति घाटा भयो । हल भाडा, बत्तीको पैसा, कर्मचारीलाई तलब, हल नचले पनि बैंकको ब्याज दिनुपर्‍यो । मलको कम्युनिटी चार्जसहित गरेर २६ लाख हरेक महिना गइरहेको छ । यो अवस्था कहिलेसम्म जान्छ त्यो पनि थाहा छैन,' उनले आफ्नो समस्या सुनाए ।
अझै हल खोल्ने निर्णय नहुँदा आफूहरुमा अन्योल छाएको उनी बताउँछन् । 'हल अझै खोल्ने/नखोल्ने टुङ्गो छैन । के होला भन्ने चिन्ता छ । हल चलेको भए केही आम्दानी हुन्थ्यो । अहिले त उल्टै पैसा गइरहेको छ,' उनले भने ।
मैनाली र जबराको मात्र समस्या होइन, देशभरका हल सञ्चालकको साझा समस्या हो यो । त्यसैले हल सञ्चालक अब सरकारले हल खोल्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । 'हामीलाई हल कहिले खोलौं भइसक्यो । सरकारले अब त अनुमति दिनुपर्ने हो,' क्यूएफएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन अडिगा बताउँछन् ।
बुटवलमा नयाँ हल सञ्चालन गरेको वर्ष दिनमै हल बन्द गरेर बसेका हल सञ्चालक प्रदीपकुमार उदयको गुनासो पनि उस्तै छ । 'अहिले एक किसिमले सामान्य भइसक्यो अवस्था । यातायत, होटल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, उद्योग सबै खुल्यो । हल मात्र खुलेन । त्यसैले अब हामीलाई हल खोल्नु दिनुपर्‍यो । स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर हामी हल खोल्न तयार छौं,' उनले भने ।
भारतले अक्टोबर १५ देखि हल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै नेपालका हल सञ्चालकलाई नेपालमा पनि हल खोल्न अनुमति दिनुपर्ने लागेको छ । 'हल सञ्चालन सुरु गर्न पाए आर्थिक मार घट्थ्यो कि भन्ने हो । संसारको झण्डै ९५ देशमा हल खुलिसकेको छ । हवाई उडानदेखि होटलहरु खोल्न दिइएको छ । तर अझै सरकारले हल खोल्न दिएको छैन,' आक्रोश मिसिएको स्वरमा जबराले भने, 'एउटा व्यवसायलाई खोल्न दिने अर्कोलाई खोल्न नदिने गर्न मिलेन । अरु व्यवसायमा संक्रमण नहुने हाम्रोमा चाहिँ हुने भन्ने हुँदैन । हामीले सबै सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर काम गरिहाल्छौं ।'
सरकारले अझै मनोरञ्जन क्षेत्रतर्फ चासो नदेखाउँदा आफूहरु सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, 'सबैभन्दा मारमा परेको उद्योग व्यवसायमा पर्छ चलचित्र क्षेत्र पर्छ होला । अरु व्यापार व्यवसायले सरकारबाट पाएको प्रोत्साहन हामीले पाएनौं । अहिलेसम्म सरकारबाट हल खोल्ने निर्देशन नआएको हुनाले अन्यौलमा छौं हामी ।' हल खोल्न दिए २/३ वर्ष लगाएर भए पनि अहिलेको घाटाबाट उकास्न सकिने लागेको छ उनलाई ।
कहिले खुल्ला त हल ?
काठमाडौं कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएकाले अझै हल खोल्ने टुङ्गो नभएको बताउँछन् चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान । उनले भने, 'संक्रमण दिनप्रतिदिन बढेको बढ्यै छ । हल कहिले खुल्छ भन्न सक्दिनँ । हल खोल्न दिनुपर्‍‍यो भनेर सरकारसमक्ष कुरा राखेका छौं । दसैंसम्म हल खुल्न सक्ने सम्भवाना त छ तर ठोकुवासाथ भन्न सक्दिनँ,' अध्यक्ष प्रधानले भने ।
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल पनि हल खुल्ने निश्चित निर्णय नभएको बताउँछन् । 'हामीले सबै क्षेत्र खुल्न थालेपछि हल पनि खोल्न दिनुपर्‍यो भनेर कुरा राखेका छौं । तर सरकारबाट हल खोलिहाल्ने संकेत आएको छैन । हल खोल्न त खुल्छ नै तर कहिले एकिनका साथ भन्न सकिन्न,' उनले भने, 'मनोरञ्जन क्षेत्रलाई अब बिस्तारै कोभिडसँग सहयात्रा गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ । हल बन्द भएको धेरै समय भयो । सरकारले हल खोल्ने निर्णय नगरेसम्म केही भन्न सकिन्न ।'
यसबीच हल सञ्चालकले सरकारसँग बैंकको ब्याज, बिजुली डिमान्ड शुल्क र आयकरमा छुट पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । बैंकको ब्याजको विषयलाई सम्बोधन गरे पनि अन्य कुरामा सरकारले हलवालाको समस्या नसुनेको बताउँछन् अध्यक्ष प्रधान । 'हामीले हाम्रो सबै समस्या सरकारमा राखेका थियौं । तर सरकारले हाम्रो समस्या सुनिदिएन ।'
सुमित पनि अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै राहत नपाएको बताउँछन् । 'विकास बोर्डले हलबाट महिनापिच्छे उठाउँदै आएको रकमको केही प्रतिशत हामीलाई दिनुपर्‍यो भनेर कुरा राख्यौं । हललाई टिकाउनको लागि हामीले हाम्रो माग राखेका थियौं । तर हामीले कुनै सहुलियत पाएनौं,' उनले भने ।
हल खुलिसकेपछि पनि २ वर्ष 'ट्याक्स फ्रि' गराइदिनुपर्ने हल सञ्चालक प्रदीप उदयको माग छ । 'यो ६/७ महिनामा जति असर परेको छ हामीलाई । त्यसबाट उम्किनको लागि अब २ वर्ष सरकारले ट्याक्स फ्रि गराइदिनु पर्‍यो,' उनले भने ।
हलवाला र निर्माताको तालमेल
हल खोल्ने तत्काल कुनै निर्णय नआए पनि हलवाला र निर्माताबीच केही समयअगाडिदेखि फिल्म प्रदर्शनलाई लिएर छलफल जारी छ । फिल्म हलमा दर्शक आउने वातावरण नभएसम्म नेपाली फिल्म हलमा प्रदर्शन गर्न तयार छैनन् निर्माता । त्यसैले हल खोलेपछि दर्शक तान्न पुराना फिल्महरु पुन:प्रदर्शन गर्नुपर्ने निर्माताको कुरा छ । तर केही हलवाला भने यसो गर्न तयार छैनन् ।
यसरी पुराना फिल्म पुन:प्रदर्शन गरेर हलको घाटा बढ्ने सुमित बताउँछन् । 'हल खोलिहाले पनि नेपाली निर्माताले नयाँ फिल्म नलगाउने कुरा छ । पहिला बलिउड र हलिउड फिल्म चल्न दिनुपर्‍यो रे । यसरी त अहिले भइरहेको घाटामा थप घाटा हुन्छ,' सुमितले भने, 'तीनजना दर्शक आए पनि एसी चलाउनै पर्‍यो । त्यसमा १० लाख खर्च उठ्छ । ८० प्रतिशत स्टाफ बढाउनै पर्‍यो , त्यसमा १५ लाख खर्च हुन्छ । अर्को २५ लाख खर्च गरेर कसले हल खोल्ने ? मचाहिँ यसरी पुराना फिल्म चलाएर हल खोल्न तयार छैन ।'
हल सञ्चालक जबरा यस विषयमा निर्माता, वितरक र हलवालाले सम्झौतामा गरेर अघि बढ्नुपर्ने सल्लाह दिन्छन् ।
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७७ ०९:२७